Muxuu baarlamanka carabta ka yiri xaaladda Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu baarlamanka carabta ka yiri xaaladda Somalia?
Muxuu baarlamanka carabta ka yiri xaaladda Somalia?
Muqdisho (Caasimada Online) – Warsaxaafadeed kasoo baxay baarlamaanka carabta ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan doorashada.
Qoraalka oo kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka carabta, Caadil Bin Cabdul Raxman Al-Casumi ayaa marka hore waxaa lagu soo dhoweeyey qabashada shirka u iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, kaas oo loog hadlayo doorashooyinka dalka, una dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Caadil Bin Cabdul Raxman ayaa ugu baaqay dhinacyada shirka ka qeyb-galay inay xal-waara ka gaaran xaaladda cakiran ee dalka & sidii looga gudbi ahaa marxaladda adag.
“Waxaan soo dhoweyneynaa wada-hadalka qaran ee Soomaaliya waxaana ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada is haya inay si wax ku ool ah uga wada shaqeeyaan arrintan oo ah masiirka dadka Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan.
Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey inay muhiim tahay inaga fakiro mustaqbal Soomaaliya, islamarkaana ay laga wada-shaqeeyo mniga iyo xasiloonida dalka.
Ugu damhyn Al-Casumi ayaa cadeeyay mowqifka adag ee baarlamaanka carabta ee ku Aadan taageerad dadaalada loogu talagalay in lagu gaaro is afgarad qaran oo dhameystiran isaga oo ugu baaqay wadamada carabta inay xoojiyaan furfurnaantooda ayna horumariyaan xiriirkooda Jamhuuriyada. Soomaaliya heer kasta iyo dhinac walba.
Soomaaliya ayaa xilligan wajaheyso xaalad kala guur ah, iyada oo aan weli heshiis laga gaarin doorashada dalka , islamarkaana uu waqtigii ka dhamaaday dowladda federaalka.